प्रधानमन्त्री ओलीलाई मा’नसिक स’न्तुलन गु’मेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? : रमेशजंग रायमाझी «
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मा’नसिक स’न्तुलन गु’मेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? : रमेशजंग रायमाझी
प्रकाशित मिति :7January, 2021 2:39 pm
राष्ट्रियसभाका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मा’नसिक स’न्तुलनका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका उनले असंवैधानिक काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री भन्ने कि नभन्ने भन्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
“एउटा प्रधानमन्त्री हुनका लागि योग्यता चाहिन्छ । पहिलो प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्छ । दोस्रो बहुमत सदस्यको समर्थन हुनुपर्छ । तेस्रो मा’नसिक स’न्तुलन ठीक भएको हुनुपर्छ,” उनले भने, “प्रतिनिधिसभाको उहाँ सदस्य हुनुहुन्न अहिले । उहाँलाई प्रधानमन्त्री भन्ने कि नभन्ने ? बहुमतको सदस्यको समर्थन उहाँलाई देखिँदैन । असंवैधानिक काम गर्ने मान्छे मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन ? मा’नसिक सन्तुलन गुमेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? ” उनले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको पनि बताए । राष्ट्रपति नेकपाको कार्यकर्ता हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले नेकपाले राष्ट्रपति संस्थाको बद्‌नाम गरेको पनि टिप्पणी गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै उनले वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने मात्र मध्यावधिमा जानसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै संविधान पढ्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह पनि गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव हारेका मान्छेलाई मन्त्री बनाएर र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर संविधानको खिल्ली उडाउको आरोप पनि लगाए । “संविधान प्रधानमन्त्रीले मान्नुनपर्ने । प्रधानमन्त्री हिटलर हो ? जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ? म ओलीलाई मात्र भन्दिनँ सारा कम्युनिस्ट पार्टी दोषी छ यो मुलुकमा । मुलुकलाई यो दिशामा पुर्‍याउन,” उनले भने ।
त्यस्तै, रायमाझीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मु’द्दालाई प्रभावित गर्नेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको भन्दै आलोचना पनि उनले गरे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी नबोल्न पनि उनले चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण गणतन्त्र उपयुक्त होइन भन्नेलाई बल मिलेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राजाावादीलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप पनि लगाए ।
निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अदालतको फैसलामा भरपर्ने : गृहमन्त्री थापा
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत